Kafka pamahombekombe, "pop" inoverengeka kana zvinyorwa zvinyorwa? | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | 29/04/2021 17:00 | dzakawanda
Panorama yazvino yezvinyorwa zvepasirese ine nzvimbo yakakosha kurondedzero yaHaruki Murakami, munyori we Kafka pamhenderekedzo (2002). Zvese zvakataurwa nezve iri basa, pasina kukwanisa kuramba kuti vaverengi vemunyori wechiJapan vakafarira sei. Uye ndezvekuti Murakami ine dhizaini inoratidzirwa neasina musoro mhepo, padyo nekufungidzira kana zvemashiripiti, zvinonzwisisika mune inoano.
Naizvozvo, mumwe anogona kutaura nezve "murakamian" nyika, mune hupenyu hwevatambi hwakaomarara uye hunovhiringidza. Iyo inoverengeka ine zano rinotenderera pamusoro pevanhu vaviri, mumwe mudiki uye mumwe mukuru, akagadziriswa nemamiriro avo.. Mukutaura, nyaya dzavo dzinoita sedzisina kufanana, zvisinei, Murakami inogadzira nzira ine hungwaru yekuvarondedzera.
1 Rumwe ruzivo rwehupenyu pamusoro pemunyori, Haruki Murakami
1.1 Mabhuku ekutsaurira
1.2 Mamwe mabhuku anotengesa zvakanyanya aMurakami
1.3 Zvinyorwa muMurakami: maitiro uye zvinokanganisa
2 Pfupiso yeKafka pamhenderekedzo
2.1 Iyo yakafanana nyaya
3 Kafka kuongororwa pamahombekombe
3.1 Kukosha kwechirongwa chako chekunyora
3.2 Mutsva pakati pemashiripiti uye chaiye
3.3 Mazwi akatsoropodza
3.4 Misoro yakadzika yevanhu
Rumwe ruzivo rwehupenyu pamusoro pemunyori, Haruki Murakami
Haruki Murakami munyori uye muturikiri akaberekerwa muguta reKyoto muna Ndira 12, 1949, akafuridzirwa zvakanyanya nemabhuku eWestern. Munguva yehudiki hwake akagamuchira dzidziso yeJapan neyechiBhudha kubva kuna sekuru vababa vake, achiri kukura naamai vevatengesi. Gare gare, Akapinda Waseda University, kwaakadzidza Hellenic mabhuku uye mutambo.
Muimba yambotaurwa yezvidzidzo akasangana nemukadzi wake weramangwana, Yoko. Vaviri ava vakazofunga kusave nevana, pachinzvimbo vakafunga kutsvaga kirabhu yavo yejazz muTokyo, inonzi Peter Cat. Zvakare, semutambi we baseball, akaenda kumitambo yakawanda. Ipapo, panguva yemutambo kurova kubhora kwakamufemera kunyora runyorwa rwake rwekutanga, Inzwa rwiyo rwemhepo (1973).
Zvinyorwa zvekutanga zvakanyorwa naMurakami zvaive nenhamba dzakaderera kwazvo dzekunyora. Zvisinei nemamiriro ezvinhu aya, murume wechiJapan wematsamba haana kuora moyo, asi akaramba achigadzira zvinyorwa zvisina mitsara pakati pezvakanaka nezviroto.
Ma80 akaona kuvhurwa kwe Pinball 1973 (1980) y Kuvhima gondohwe remusango (1982). Pakupedzisira, mu 1987, Tokyo Blues (Norweigian Wood) yakaunza mukurumbira wenyika nemunyika dzeMurakami. Kubva gore iro, munyori wechiJapan akaburitsa zvinyorwa zvipfumbamwe, kuunganidzwa kushanu kwenyaya pamwe nemagwaro akawanda emhando dzakasiyana pakati nyaya dzakaratidzwa, zvinyorwa uye mabhuku yehurukuro.
Mamwe mabhuku anotengesa zvakanyanya aMurakami
Nhoroondo yeshiri iyo inotenderera nyika (1995)
Rufu rwemukuru (2017)
Zvinyorwa muMurakami: maitiro uye zvinokanganisa
Haruki Murakami nemukadzi wake vakagara pakati peUnited States neEurope kusvika 1995, pavakasarudza kudzokera kuJapan. Zvichakadaro, kuzivikanwa kwake mune yekunyora nyika kwaiwedzera. Kunyangwe, atove mune izvo zviitiko iye akashatiswa nemamwe mazwi akatsoropodza, kuMabvazuva nekuMadokero.
Uye zvakare, kuburitswa kwa Kafka pamhenderekedzo muna 2002 akaita kuti munyori weKiotense awedzere kuverengerwa zvakanyanya uye akasimudza mukurumbira wake kusvika padanho rekuti akasarudzwa muNobel Prize kakawanda. Pane rimwe divi, akakosha akakurudzira mumabhuku ake angave mimhanzi - jazi, kunyanya - uye nhoroondo yeNorth America kubva kuvanyori vakaita saScott Fitzgerald kana Raymond Carver.
Pfupiso ye Kafka pamhenderekedzo
Mudiki Tamura anogara nababa vake, waunoshamwaridzana naye zvakashata, kuita kuti zvinhu zviwedzere, mai vavo nehanzvadzi yavo vakavasiya apo iyeye aive mudiki. Muchirevo ichi, protagonist anotiza pamba mushure mekusvitsa makore gumi nemashanu. Ehe, ikozvino Kafka Tamura ari kuenda kumaodzanyemba, kuTakamatsu.
Panguva iyoyo mubvunzo usingadzivisike unomuka: sei protagonist ichitiza? Nemhinduro, zvinhu zve surreal zvinotanga, sezvo baba vaKafka Tamura vachipomera mwanakomana wavo saOedipus Rex, vachida kumuuraya kuti arare naamai vake nehanzvadzi.
Iyo yakafanana nyaya
Kune rimwe divi, Satoru Nakata anounzwa, murume akwegura akararama chiitiko chisingatsanangurike panguva yehudiki hwake. Kunyanya, akarasikirwa nechaano uye pakumuka akarasikirwa neyekurangarira uye ekugona masimba, mukuwedzera: aigona kutaura nekatsi. Neichi chikonzero, akafunga kupira hupenyu hwake kununura felines kwese kwese ndokusangana nemunhu anonzi Johnny Walken, akabatana nekitsi.
Paakasvika kuTakamatsu, Kafka Tamura akawana utiziro muraibhurari. Ikoko, Mai Saeki (director) naOshima, vanobatsira protagonist. Tevere, Kafka Tamura ane nzira dzinonakidza neaya mavara, achiona muOshima sosi yezvakazarurwa pamusoro pake.
Gare gare, Nakata anoona kuti Johnny Walken, chokwadi, murume akaipa anouraya felines. Nekudaro, anomurwisa kusvikira amukunda (achibatsirwa nekatsi). Mushure meizvozvo, murume mukuru anosangana naTamura muTakamatsu nekupinda mune yakasarudzika ndege. Saka, zvichiteerana, hupenyu hwenhengo dzese dzenyaya dzakapindirana pasina imwe tsananguro kusvika kumagumo kwebhuku.
Analysis Kafka pamhenderekedzo
Kukosha kwechirongwa chako chekunyora
Iyo rondedzero yenyaya Kafka pamhenderekedzo edza kujoina nzira dzinoverengeka, zvinoita kunge zviri kure nemumwe, kutungamira tambo yezviitiko. Nenzira iyi, kuda kuziva kwemuverengi kunowedzera sezvo nyaya dzisina kuenderana dzakaburitswa pachena.
Kana iri nyaya iyi, zvingave zvichinetsa kunzwisisa chikonzero chekuchinjaniswa kwenyaya mbiri - pakutanga - dzakabatana. Kunyangwe izvi, vaverengi vanonamira kuti vadzidze nezve kuitika kwezviitiko zvekuda kuziva uye zvinoshungurudza zvevatambi kuva padhuze. Mukupedzisira, pane nzira inoshamisa yekuisa nyaya pamwechete, uchishandisa fungidziro.
Mutsva pakati pemashiripiti uye chaiye
Kazhinji, zvinyorwa zvinokurudzirwa na Haruki Murakami inosanganisira musanganiswa wemipimo miviri iri mukati meyunifomu imwechete. Mune mamwe mazwi, nzira yenyaya yacho inogona kufambira mberi kubva murondedzero chaiyo chaiyo kuti ibude mune zvemashura, pasina dambudziko. Kusvika padanho rekuti izvo zvekufungidzira zvinopedzisira zvave kufungidzirwa sechokwadi.
Vamwe vakatsoropodza chikamu vakatsanangura rondedzero yemunyori wechiJapan se "pop novel", inosanganisira zvinyorwa zvakavimbika (zviratidzo, semuenzaniso) Mukufanana, chokwadi chakakombama mbichana mbichana nekuda kwekubvunza mibvunzo isingabviri. Iyo yekupedzisira ndiyo sosi kunyanya kutaurwa nezvaMurakamini, zvese kune vanomushora, uye nemamirioni evateveri vake.
Misoro yakadzika yevanhu
Sezvo mune vamwe vanotengesa zvakanyanya kubva kumunyori wechiJapan, Kafka pamhenderekedzo ine kuomarara kunemusoro (zvinonzwisisika) nyore kuverenga. Panguva ino, maitiro pazvinhu zvakakosha zvevanhu (rudo, kusurukirwa, kushushikana ...) zvakakosha kusunga muverengi.
Muchokwadi, nyaya yega yega, kunyangwe ingave yakaoma sei, iri kuratidza kushungurudzika kunomiririra kusurukirwa uye wega (Satoru Nakata) uye nzira yekubuda nayo. Kunyange, dingindira rehukama hwemhuri uye mhedzisiro yekusanzwa nzvimbo yemunhu kusvika pakuenda (Kafka Tamura), inongedzera kuhupenyu hwevanhu pachahwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Kafka pamhenderekedzo